Man United oo soo bandhigtay maaliyadda ay xiran doonto marka ay gurigeeda ku ciyaarayso fasal ciyaareedka cusub ee 2020/21.… + SAWIRRO – Gool FM
(Manchester) 04 Agoosto 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ee ka dheesha horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ayaa soo bandhigtay maaliyadda ay ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub.
Kooxda ka dhisan Magaalada Manchester waxa ay shaacisay maaliyadda ay ku ciyaari doonto marka ay mininkeeda joogto xilli ciyaareedka cusub ee 2020/21.
Maaliyaddan oo dhammaanteed wada casaan ah ayaa garbaha ku leh saddex diilin oo caddaan ah, waxaana ay sidoo kale jiitimo yar yar oo Jaalle ah
Labiskan cusub oo ay kooxda Manchester United ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub waxaa farsameysay shirkadda qalabka isboortiga ee Adidas, waxaana xabadka kaga dheggan magaca CHEVROLET iyo sumadda shirkadda ay xayeysiin doonto iyo sidoo kale astaanta kooxda.
Kooxda uu hoggaamiyo macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa markii ugu horreysay maaliyaddaan cusub ku ciyaari doonta marka ay LASK ku soo dhaweyneyso garoonka Old Trafford lugta labaad ee 16-ka Europa League habeenka Khamiista ay soo galayso.
"Sergio Ramos wuxuu awoodaa inuu ciyaaro illaa inta uu ka gaarayo 40 sano" – Xiddig ay ka wada tirsanaayeen Real Madrid